डडेल्धुरा अस्पतालबाट भागेका २ जनाको कोरोना रिपोर्ट आयो, पाेजेटिभ की नेगेटिभ ? — Imandarmedia.com
डडेल्धुरा अस्पतालबाट भागेका २ जनाको कोरोना रिपोर्ट आयो, पाेजेटिभ की नेगेटिभ ?
काठमाडाैं । अस्पतालबाट भागेका दुई जनाको कोरोना भाइरस परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ। काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा दुवैको कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा जगदीशचन्द्र विष्टले पुष्टी गरे।
कोरोना भाइरसको आशंकामा दुवैजनालाई डडेल्धुरा अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। शनिबार दिउँसो उनीहरु अस्पतालबाट भागेका थिए। अस्पतालबाट भागेका उनीहरु भागेश्वर गाउँपालिका– ३ नानीगाडका व्यक्ति हुन्।
यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रहरुमा आइतबार बिहान समाचार तयार पार्दासम्म ४२९ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाका कारण भारतमा २८८, पाकिस्तानमा ८६, बंगलादेशमा ३०, अफगानिस्तामा १८ र श्रीलंकामा ७ जनाले ज्यान गुमाएसँगै सार्क राष्ट्रमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२९ पुगेको हो ।
माल्दिभ्स र नेपालमा संक्रमणका घटना भए पनि भुटानको अवस्था नियन्त्रण उन्मुख छ । यी देशहरुमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण कसैको ज्यान गएको छैन । सार्क राष्ट्रहरुले कोरोनाको रोकथामका लागि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइरहेका छन् । सार्क राष्ट्रमा संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या भारतमा सबैभन्दा उच्च देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण एसियामै सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेको सूचीमा समेत भारत पाँचौं स्थानमा रहेको छ । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी इरानमा कोरोनाका कारण ४ हजार ३५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दोस्रोमा चीनमा ३ हजार ३ सय ३९ को मृत्यु भएको छ । तेस्रोमा रहेको टर्कीमा १ हजार १०१ जना, चौथोमा इन्डोनेसियामा ३२७ जना र पाँचौमा रहेकाे भारतमा २८८ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाको कहर कस्तो छ सार्क राष्ट्रमा ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण भारतमा बढ्दो रुपमा देखिएको छ । भारतमा आइतबार विहानसम्म २८८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा ३९ जनाको मृत्यु भएसँगै २८८ पुगेको हो । भारतमा एकैदिन ८४६ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या ८ हजार ४४६ पुगेको छ । भारतमा संक्रमितमध्ये ९६९जना उपचारपछि निको भएका छन् । ७ हजार १८९ जना उपचाररत छन् ।
भारतपछि सार्क राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाकिस्तानमा बढी देखिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण पाकिस्तानमा हालसम्म ८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ११ जना संक्रमित भएका छन् । कोरोनाका कारण एकै दिन पाकिस्तानमा थप २० जनाको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या ८६ पुगेको हो ।
पाकिस्तानमा शनिबार ३१६ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या ५ हजार ११ पुगेको हो । पाकिस्तानमा संक्रमितमध्ये ७६२ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ४ हजार १६३ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये २३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बंगलादेशमा पनि बढ्दो रुपमा देखिएको छ । बंगलादेशमा शनिबार थप ३ जनाको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुगेको छ । त्यसैगरी शनिबार थप ५८ जनामा संक्रमण देखिएसँगै बंगलादेशमा हालसम्म संक्रमितको संख्या ४८२ पुगेको छ ।
बंगलादेशमा संक्रमित ४८२ जना मध्ये ३६ जना उपचारपछि निको भइसकेको छन् । ४१६ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यी मध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । सार्क राष्ट्रहरुमध्ये अफगानिस्तानमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रुपमा देखिएको छ । अफगानिस्तामा हालसम्म १८ जनाको मृत्य भएको छ ।
अफगानिस्तामा शनिबार थप ३ जनाले ज्यान गुमाएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या १८ पुगेको छ । शनिबार थप ३४ जना नयाँ संक्रमित फेला परेसंगै संक्रमितको संख्या ५५५ पुगेको छ । अफगानिस्तानमा संक्रमितमध्ये ३२ जना उपचारपछि निको भएका छन् । ५०५ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
सार्क राष्ट्रकै अर्को मुलुका श्रीलंकामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण केही बढ्दो मात्रामा देखिएको छ । कोरोनाका कारण श्रीलंकाका शनिबार थप ८ जना नयाँ संक्रमित भएटिए पनि पछिल्लो २४ घण्टामा कसैको ज्यान गएको छैन । हालसम्म श्रीलंकामा ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
श्रीलंकामा विहीबार थप ८ जनामा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १९८ पुगेको हो । जसमध्ये ५४ जना उपचारपछि निको भएका छन् भने १३७ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उपचाररत संक्रमितमध्ये १ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।
नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ९ पुगेको छ । गत चैत २० गते विहीबार थप तीन जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ९ पुगेको हो । त्यस यता नेपालमा नयाँ संक्रमित फेला परेका छैनन् । नेपालमा कोरोना संक्रमित ९ जनामध्ये एक जनाको उपचारपछि निको भइसकेको छ भने अन्य ८ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिका एक जना बाहेक अरु सबै विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरु हुन । नेपालले कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ । सरकाले लकडाउन लागू गरेको आइतबार २० औं दिन पुगिसकेको छ ।
सार्क राष्ट्रहरुमध्यकै अर्को मुलुक माल्दिभ्समा शनिबारसम्म थप संक्रमित र मृत्यु भएका नयाँ घटना देखिएका छैनन् । हालसम्म त्यहाँ १९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । जसमध्ये १३ जना संक्रमित उपचारपछि निको भइसेका छन् भने ६ जनाको विभिन्न उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।
सार्क राष्ट्रहरुमध्ये कोरोना भाइरसको सबैभन्दा कम संक्रमण भुटानमा देखिएको छ । भुटानमा हालसम्म संक्रमितको संख्या ५ रहेको छ । भुटानमा संक्रमित ५ जनामध्ये २ जनोको उपचारपछि निको भइसकेको छ भने अन्य ३ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।